Ahoana no ahatongavan'i Jesosy fanindroany ▷ ➡️ Hahita an-tserasera ▷ ➡️
Hanao ahoana ny fiavian'i Jesosy fanindroany
Hanao ahoana ny fiavian'i Jesosy fanindroany. Iray amin'ireo tsy fantatra lehibe indrindra amin'ny ivon'ny Kristianisma rehetra ny fiavian'i Jesosy fanindroany. Ho an'ny olona maro, tena akaiky io zava-misy io. Ho an'ny sasany dia mbola lavitra ny toerana. Na izany aza, tsy misy manana ny valin'ny fanontaniana. Ny hany zavatra azon'ny Kristiana manam-pinoana atao dia ny mahafantatra ahoana ny fihaviana fanindroany ary ho voaomana tsara ho an'ny hetsika manan-danja indrindra amin'ny tantara.
Noho io antony io, nanomboka Discover.onlineTianay ny mamaly ny fanontaniana manandanja indrindra apetraky ny Kristiana tsirairay avy amin'ny tenany momba io fotoana io. Ho an'izany dia hanampy ny tenantsika amin'ireo andalan-tsoratra masina isika izay mitantara an'io zava-misy io miaraka amin'ny fanazavana mifanaraka amin'izany.
1 Hanao ahoana ny fiavian'i Jesosy fanindroany
1.1 Andinin-Baiboly milaza ny fiaviany fanindroany
2 Rahoviana no ho tonga ny fiavian'i Jesosy fanindroany?
Ny fiavian'i Jesosy fanindroany hitranga amin'ny faran'ny fotoana izany. Ankoatr'izay, ny zava-drehetra el tontolo ho hitanao izany. Andro fitsarana ho an'ny firenena rehetra izany. Fa ho an'ny voavonjy, ny fiverenan'i Jesosy dia ho loharanom-pifaliana, satria handresy ny devoly ary hitarika azy ireo hiara-hiaina aminy mandrakizay.
Amin'ny fiavian'i Jesosy fanindroany dia hahita an'i Kristy midina avy any an-danitra miaraka amin'ny anjely izao tontolo izao. Handre trompetra isika dia hitsangana ny maty. Etsy ankilany, hoentina ny velona. Samy handohalika ny olona rehetra hivavaka amin'i Jesosy. Ho potika izao tontolo izao ankehitriny, haorina ny fanjakan'Andriamanitra ary ny mpino hiaina mandrakizay miaraka amin'i Jesosy.
Andinin-Baiboly milaza ny fiaviany fanindroany
Ary amin'izany ny famantarana ny Zanak'olona dia hiseho any an-danitra; ary ny firenena rehetra ambonin'ny tany dia halahelo ka hahita ny Zanak'olona avy eo amin'ny rahon'ny lanitra amin'ny hery sy voninahitra lehibe. Ary haniraka ny anjeliny amin'ny feon'anjomara mafy izy, dia hanangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra.
Matio 24: 30-31
Satria rehefa omena ny baiko, miaraka amin'ny feon'ny arikanjely sy ny feon'ny anjomara, dia ny Tompo mihitsy no hidina avy any an-danitra, ary ny maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. 17 Ary isika izay velona dia hakarina hiaraka aminy ho amin'ny rahona hitsena ny Tompo amin'ny habakabaka. Ary noho izany dia hiaraka amin'ny Tompo mandrakizay isika. 1
Tesaloniana 4: 16-17
«Ary ho anao izay ory, omeo fitsaharana miaraka aminay, rehefa miseho avy any an-danitra Jesosy Tompo miaraka amin'ny anjelin'ny heriny,
amin'ny lelafo mba hanome famaliana ho an'izay tsy mahalala an'Andriamanitra na tsy manaiky ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompontsika;
Izay hiaritra ny sazin'ny fahaverezana mandrakizay, tsy ho eo anatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny,
rehefa tonga amin'izany andro izany izy mba hanomezam-boninahitra ny olony masina sy hankalazana izay rehetra mino (satria ny teninay dia nino teo aminareo) ». 2
Tesaloniana 1: 7-10
«Miandry sy manafaingana ny fihavian'ny andron'Andriamanitra, izay hamongorana ny lanitra, ary ho levona ireo singa, raha may!
13 Fa isika manantena lanitra vaovao sy tany vaovao, araka ny fampanantenany, izay honenany ny rariny. "
2 Petera 3: 12-13
Rahoviana no ho tonga ny fiavian'i Jesosy fanindroany?
Tsy misy mahalala ny daty izay hiverenan'i Jesosy. Tsy azo atao ny maminavina hoe rahoviana no hisy izany satria hitranga izany rehefa tsy miandry isika. Raha misy miteny hoe fantany ny fotoana hitrangan'izany dia diso izy ireo. Raha misy milaza fa efa niverina i Jesosy dia tsy tokony hino izany isika satria rehefa hitranga dia ho fantatry ny rehetra.
Ary ny andro sy ny ora dia tsy misy mahalala, na ny anjelin'ny lanitra, tsy ny Zanaka, fa ny Ray ihany.
Matio 24: 36
Ny filaharan'ny hetsika amin'ny fiavian'i Jesosy fanindroany dia tsy mazava ao amin'ny Baiboly. Ny zava-dehibe indrindra dia ny hiverenan'i Jesosy indray andro any tsy maintsy miomana isika satria mety hitranga amin'ny fotoana rehetra. Ny fomba tsara indrindra hiomanana amin'ny fiavian'i Jesosy fanindroany dia ny mibebaka amin'ny fahotanao ary miaina ho an'Andriamanitra.
Ny fiavian'i Jesosy dia anton'ny fifaliana sy fanantenana ho an'ny mino. Tsy tokony hatahotra izay hitranga isika. Ho an'ireo izay nandà an'i Jesosy dia ho andro fanamelohana ho an'ny ota izany. Fa ho antsika dia midika izany fa hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay isika, ao amin'ny Fanjakan'ny fahamarinana, fiadanana ary fifaliana.
Manantena izahay fa hanampy anao hahatakatra ity lahatsoratra ity hanao ahoana ny fiavian'i Jesosy fanindroany. Raha izao dia te hahalala ianao maninona no zava-dehibe ny mandeha miangona ary izay lazain'ny Baiboly momba an'io lohahevitra io, manohiza mizaha Discover.online.
Fa maninona ny Kristiana no tsy miala sasatra amin'ny Sabata?